Anjara asa (fitsipiteny): Fahasamihafan'ny versiona - Wikipedia
Anjara asa (fitsipiteny): Fahasamihafan'ny versiona
Anjara asa (fitsipiteny) (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Febroary 2019 à 14:25
3 170 octets ajoutés , il y a 3 ans
Endrik'io pejy io tamin'ny 4 Febroary 2019 à 14:06 (hanova)
Endrik'io pejy io tamin'ny 11 Febroary 2019 à 14:25 (hanova) (esory)
Ny [[Anjara asa (fitsipiteny)|anjara asa]] dia ny karazam-pifandraisana sy fifampiakinana misy eo amin'ny teny na andian-teny sy ny teny na andian-teny fototra mikambana ao amin'ny andian-teny lehibe kokoa (izay mety ho [[tarika]] na [[fehezankevitra]] na [[fehezanteny]]). Ireto ny anjara asa mateti-pitranga ao amin'ny fehezanteny: ny [[entimilaza]] sy ny [[Lazaina (fitsipiteny)|lazaina]] ary ny [[Fameno (fitsipiteny)|fameno]]. Amin'ny fitsipiteny malagasy, ankoatra ny entimilaza sy lazaina ary ny fameno, dia avahana koa ao amin'ny fehezanteny ny reny lazaina sy ny ana-daaina, ny reny entimilaza sy ny anak'entimilaza, ny reny fameno sy ny zana-pameno.
== Anjara asan'ny reniteny ==
=== Ny entimilaza ===
Ny entimilaza na vara dia anjara asan'ny teny na andian-teny anambaràna ny asa atao na ny asa mihatra amin'ny zavatra ambara amin'ny teny mitana ny anjara asa lazaina, na koa anambaràna ny toetrany na ny misy azy na ny fifandraisany amin'ny zavatra hafa.
==== Sokajin-teny azo atao entimilaza ====
* '''Entimilaza matoanteny'''
Ny matoanteny matetika no misahana ny anjara asa entimilaza nefa afaka misahana izany koa ny mpamari-toetrana ny anarana na ny mpisolo sns arakaraka ny fiteny ka mety mila na tsy mila fampiasana matoanteny mpampikambana izany. Ny ankamaroan'ny boky mampianatra fitsipitenin'ny fiteny sasany ao Eoropa (fiteny frantsay, anglisy sns) dia mampifangaro ny hoe "matoanteny" (izay sokajin-teny) amin'ny hoe "entimilaza" (izay [[Anjara asa (fitsipiteny)|anjara asa]]<nowiki/>n'ny teny) ka mampianatra fa ny fehezanteny feno dia ahitana matonteny sy lazaina ary fameno.
* '''Sokajin-teny hafa azo atao entimilaza'''
==== Firafitra sy endriky ny entimilaza ====
* '''Ny toerana misy ny entimilaza ao amin'ny fehezateny'''
* '''Ny famenon'ny entimilaza'''
* '''Endriky ny entimilaza'''
=== Ny lazaina ===
Ny lazaina dia anjara asan'ny teny misahana ny fanaovana ny asa na tompon'ny toetra resahina ao amin'ny [[fehezanteny]] tsotra amin'ny fiendrika manano.
==== Sokajin-teny azo atao lazaina ====
* '''Lazaina anarana'''
Ny lazaina dia matetika anarana.
* '''Sokajin-teny hafa azoatao lazaina'''
Tsy ny anarana ihany no azo atao lazaina. Arakaraka ny fiteny na ny fahafahan'ny fiteny dia mety azo atao lazaina koa ny sokajin-teny toy na ny mpisolo, ny mpamari-toetra ary ny matoanteny. Ny andian-teny toy ny tarika sy ny fehezankevitra koa dia azo atao lazaina.
==== Firafitra sy endriky ny lazaina ====
* '''Ny toerana misy ny lazaina ao amin'ny fehezateny'''
* '''Ny famenon'ny lazaina'''
* '''Endriky ny lazaina'''
==== Ny lazaina sy ny fitodiky ny fehezanteny ====
Tsy ny mpanao ny asa na ny tompon-toetra ihany no azo atao lazaina. Raha ovana todika ny fehezanteny dia mety ho ny teny misahana ny anjara asa iharana na toe-javatra no lasa lazaina ka ilay teny nisahana ny anjara asa lazaina teo aloha lasa fameno. Arakaraka ny fiteny na ny fahafahan'ny fiteny dia azo atao lazaina ny teny ilazana ny iharan'ny asa na ny toe-javatra (fotona, antony, vokany sns).
=== Fameno ===
Ny fameno dia anjara asan'ny teny na andian-teny miankina amin'ny teny na andian-teny iray hafa ao anaty fehezanteny na tarika.
==== Sokajin-teny azo atao fameno ====
* '''Fameno anarana'''
Ny fameno dia matetika anarana.
* '''Sokajin-teny hafa azo atao fameno'''
Tsy ny anarana ihany no azo atao fameno. Arakaraka ny fiteny na ny fahafahan'ny fiteny dia mety azo atao fameno koa ny sokajin-teny toy na ny mpisolo, ny mpamari-toetra ary ny matoanteny. Ny andian-teny toy ny tarika sy ny fehezankevitra koa dia azo atao fameno.
==== Karazana anjara asa fameno ====
* '''Famenon'ny entimilaza'''
* '''Famenon'ny fehezanteny'''
* '''Karazana anjara asa fameno hafa'''
==== Firafitra sy endriky ny fameno ====
* '''Ny toerana misy ny famenoao amin'ny fehezateny'''
* '''Endriky ny fameno'''
Hita tao amin'ny "https://mg.wikipedia.org/wiki/Manokana:MobileDiff/966032"